Malunga nathi - Jiangsu Excalibur Power Machinery Co., Ltd.
Isatifikethi kunye neNhlonipho
Ulawulo loMgangatho kunye nesiQinisekiso
Vula isakhelo sedizili yedizili
Olingene Pump Water
Separafini Water Pump
Impompo yaManzi aDaka idizili
Pressure High Pump
Umphezulu Ukugqiba Screed
Umlimi wamandla kunye noMlimi
Iintsimbi kunye nezixhobo
Iinjini abaza kuzisebenzisa
Iipompo zamanzi ezingasasebenziyo
Imishini yoKwakha yokuKhanya eKhanyayo
ISATIFIKETHI & NOMBUZO
UNYAKA IGAMA UMTHOMBO
2018 Ishishini eliPhambili lobuChwepheshe beTekhnoloji Ummandla weXinghua weKomiti kaMasipala woPhuhliso lwezoQoqosho
2017 Amashishini obuchwephesha ISebe lezeNzululwazi nobuChwepheshe lePhondo laseJiangsu
ISebe lezeMali lePhondo laseJiangsu
2016 Ishishini lobuChwepheshe babucala Umbutho woShishino lwaBucala beJiangsu
ISIQINISEKISO SOLAWULO LWEZOSHISHINO
2016 ISIQINISEKISO SENKQUBO YOLAWULO LOMGANGATHO IAF, CNAS
2015 ISIQINISEKISO SOKUTHOTYELWA KWENKQUBO I-SGS
2014 UQINISEKISO LOKUTHOBELA- CE ENTE CERTIFICAZIONE KOMATSHINI LTD.
2020 Isakhelo soqhagamshelo oluzinzileyo lokuxhasa udizili I-Ofisi yePropathi yeNgqondo yase China
2019 Umvelisi wedizili ekulula ukuhlanganisa ukuhambisa izinto zokuhambisa izinto I-Ofisi yePropathi yeNgqondo yase China
2018 Hlanganisa izibophelelo ezizinzileyo zomvelisi wedizili I-Ofisi yePropathi yeNgqondo yase China
2017 Isihlalo sokuthambisa esizinzileyo somvelisi wedizili I-Ofisi yePropathi yeNgqondo yase China
2016 Isixhobo esijikeleza iRadiator kumvelisi wedizili I-Ofisi yePropathi yeNgqondo yase China
AMABHASO ASUKA ALIBABA
2013 Ukusika i-Edge nge-E-yorhwebo kwiRhwebo lweHlabathi Alibaba.com
Izinto eziluncedo koomatshini bokucheba i-laser bhetyebhetye, ukuchaneka, ukuphindaphinda, isantya, ukusebenza ngempumelelo kweendleko, umgangatho omkhulu kunye nokusika okunganxibelelananga.
I-Excalibur ityale iiseti ezimbini zoomatshini bokucheba i-laser ukuqinisekisa ukuchaneka kweemveliso ze-Excalibur kunye nemveliso. Ngoncedo loomatshini bokucheba i-laser, i-Excalibur inokuzalisekisa iimfuno zabathengi ze-OEM zokongeza iilogo kwiimveliso zethu.
Utshintsho olusuka "lwenziwe ngu-Excalibur" luye "kuLuhlu olwenziwe ngobukrelekrele
Abakwa-Excalibur bameme iiLayini ezimbini zeNdibano eziZenzekelayo ezahlukileyo, ezinesakhono sokuvelisa iiseti zeenjini ezili-1250 kumgca ngamnye mihla le. Ezinye iindawo eziphambili ziya kwenziwa ziirobhothi, ezinokuthi zinciphise iimpazamo ezibangelwa ngabasebenzi. Kwaye ngenkqubo ye-ERP, sinokulawula kwaye sibeke iliso kumasifundisane, imveliso, abasebenzi, umgangatho, izinto kunye nokusingqongileyo ukuqhuba imveliso ye-Excalibur, ukusebenza ngokukuko phambili.
Umatshini Welding Robot
I-robotic welder inokufikelela kumgangatho ophezulu ngokuqinisekisa isantya esifanelekileyo se-welding, i-angle kunye nomgama ngokuchaneka (+ 0.04mm). Ukuqinisekisa ukuba indibaniselwano enye yewelding iveliswa ngokungaguquguqukiyo ikumgangatho ophezulu kakhulu kunciphisa isidingo sokuphinda kwenziwe iindleko.
Ngoncedo lweeMoto ze-Robot Welding Machines, i-Excalibur inyuke kakhulu kwimveliso, ke ngoko, iqinisekisa ixesha lokuhanjiswa. Ayisiyiyo kuphela i-Excalibur yokuqinisekisa ixesha lokuhanjiswa, kodwa kunye nomgangatho weemveliso uyaqinisekiswa.
ULAWULO LOMGANGATHO NOKUQINISEKISWA
I-Excalibur ibisoloko izama njengesiqubulo esithi "Ukunyaniseka Kuqala, uMgangatho oPhambili" kubo bonke abathengi
Izixhobo, ezinje ngabavavanyi bokuqina, ii-micrometer, ii-callipers, kunye nesixhobo sokutsiba ukuvavanya ubungqongqo kunye noburhabaxa bomhlaba.
I-Excalibur ifuna ukuba zonke izinto ezingasebenziyo kufuneka zihlolwe ngaphambi kokungena kwindawo yokugcina izinto. Sinabahloli bezinto ezikhoyo, kunye nabahloli bezinto ezizodwa.
Uvavanyo loMgangatho weNdibano
I-Excalibur ifuna uvavanyo lokumiliselwa kuyo yonke imveliso, ukujonga ukuba akukho ngxaki na kwindibano. Sijonga isantya, iqondo lobushushu, kunye nengxolo ngokunjalo. Ukuba yonke into ilungile, siya kuthumela ekupakisheni.
Iinjineli ze-Excalibur ziphethe umgangatho wendibano . Baya kugcina iirekhodi zenkqubo kunye neziphumo.
Njengomzi mveliso, siya kuhlala siyixhasa itekhnoloji yazo zonke iimveliso zethu.
Ukuba naliphi na ityala iwaranti kwenzeka, siya kubuyela kuwe kunye nezisombululo zethu ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
Kwingxaki enkulu, nangona ithuba lincinci kakhulu, siya kuthumela amagcisa ethu aphesheya ukuba ancede ukusombulula ingxaki.
Zonke izinto zokungcebeleka, ngaphakathi kwexesha lethu lewaranti, zisimahla.
Ukuba lidlula ixesha lewaranti, sinokubonelela nangamalungu okuzisebenzisa kuzo zonke iimveliso zethu.
Ngokukumamela kwaye uhlala ufumaneka kuwo onke amabakala kwiiprojekthi zakho, amaqela ethu okuthengisa kunye noncedo lobuchwephesha bayakucebisa kwaye bongeze ixabiso eliluncedo lokwenyani.
Indlela kaChuanghui, iLincheng yeTekhnoloji yeNdawo yezoShishino, iXinghua Ctiy, kwiPhondo laseJiangsu, PRChina
© Copyright - 2010-2021: Onke amalungelo agciniwe. iveliso ezifakiwe- Iimpawu ezishushu- Sitemap.xml